Book Excerpt: Don't Envy the Bench — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Ndairidza varsity Basketball chesekondari. Ndicho mutsara wechokwadi zvachose (kana imi kundimanikidza kutsanangura shoko rei). Ndakapinda mumwe chikoro chiduku voga, uye kana uri mukuru unofanira ruvara pamusoro varsity chikwata. Ndinoda nyama yemhuka Basketball, asi ini ndiri mugove nani pane kuona pane kutamba nayo. Ndinogona kukurovai vatambi uye zhamba "Akatsuki!"Panguva referees nomwoyo-nyeredzi unyanzvi. Asi sokuziva zvazvinoita. chikoro changu vakanga mutemo uyu chinoshamisa pamusoro chaizvoizvo vachiridza zvemitambo kuti kudzidza, Zvisinei, saka ndaifanira zvienderane uye ugoisa musoro wangu mukunyadziswa ose Chishanu manheru.
The mikoko zvakanga nguva dzose dzizere kumusha mitambo. vabereki rinotsamwa uye vadzidzi-vazhinji vavo shamwari mine- akaoneka kutsigira chikwata. Zvinosuruvarisa, zvimwe akaita se yakawanda musiyano pakati mutambo sezvandaiita. Ndingade kuringa mukati bleachers nguva nenguva, achishamisika kuti vanhu vose vakanga vachifunga, kunyanya baba vangu. Ndinofunga akaona kuti tose takanga chete ikoko kuti arinde, asi ini zvakaitika kuti chigaro nani.
The chete nguva chaizvoizvo Ndakaita izvozvo pauriri waiva chaizvo kuguma mutambo-munoziva, kana vakaisa vari vakomana vanofunga zvakaipa nokuda. Ndinoda kuudza ini ivo akandiponesa masekondi avo chokupedzisira saka ndaigona kuwana takunda. Sezvo isu vakavazuzira maoko chikwata rinopikisa pashure kwokupedzisira bhaza, Ndakanzwa akafanana vatambi vakanga vachimuseka zvokutsvinya mukati kana vakatarirana ini ndokuti, "Mutambo wakanaka."
Pandaiva yakabuda yokuchinjira mbatya kuchikoro mukamuri pashure yokugezera wangu, hapana aida mufananidzo neni. Hapana vana pakati chikoro akatarisa kwandiri. Hapana musi kana chikwata ini shanje. Sei? Nekuti ndakanga zvikuru Spike Lee kupfuura Michael Jordan. Ndaiva rusero akapfeka Jersey. Ini ndaiva mukomana uyo kumbobvira akaita kupinda mutambo, uye hapana munhu shanje ari benchwarmer.
WANA IN THE GAME
Handigoni nokusingaperi kurangarira munhu kupfura munhu vanoedzesera mhepo jumper uye kushevedzera zita risingazivikanwi basa mutambi. vakomana avo vachiri nyanzvi, asi kana uchida unogona kuchinjanisa nzvimbo ine Basketball mutambi, kazhinji zviri Starter, ari mukomana uyo kunze uko kubva muromo-kure kune chokupedzisira bhaza. Imi handimbofa apo Jordan dzava maoko midair kana apo Ray Allen yakarova kuti vatatu panguva bhaza. Avo vari vakomana unoda kuva. Ndivo vari chiito panguva idzodzo dzinokosha, kwete chete spectating. Asi vamwe chikonzero zvatinoita nevakomana kana totaura upenyu. Munhu wose anoda kuva benchwarmer.
Ko ndinoreva kubudikidza kuti? Kana akauya ari kukoreji kembasi randinenge uye akabvunzurudza vadzidzi pamusoro zvinangwa zvavo kwetemu, iwe kunzwa zvakawanda pamusoro kurarama Mambo. Ungave kunzwa zvakawanda pamusoro kufunga kunakidza pane nezvaunoitawo muchinangwa chikuru nyaya. Pamwe ungave kunyange kunzwa vamwe 7:00 a.m. pfungwa. Ndiri kuda kutakura ungave kugamuchira mhinduro yakafanana pane chesekondari kana chemahofisi. Tose tine zvinangwa zvido, asi Mwari haana nguva dzose mavari.
Ndinovimba murege kutora zvandiri kutaura sezvo kokutonga mhosva. Handisi firimu mutsoropodzi trashing ari kuita; Ndiri kutsigira mutambi kuedza mitsetse rwangu rworudyi zvakare. Ndingada nhema kana ndikati kutevera Jesu nguva dzose sokuti anofadza. Right haasi nguva dzose kunzwa zvakanaka.
Ndinorangarira nguva, nokukurumidza pashure Ndakabatana mudonzvo kuchechi, kana shamwari dzangu dzose dzaienda kuita panguva imwe mumhanzi mutambo incredible. Ndaida kuva ikoko saka zvakaipa, asi ndakanga ndisingagoni kuiita nekuti ikawira muvhiki yokutanga yangu itsva basa. Ndaifanira kurwisa godo mumwoyo mangu. Kunyanya kana Ndakavaona vaiswe mifananidzo paIndaneti dzavo zvinoshamisa zvakaitika.
Dzimwe nguva tinonzwa kuti nzira noupenyu. Zviri nyore kuti shanje vamwe, kunyanya pavanenge kuita chinhu chikuru seshamwari dzangu vakanga vachiita. Asi kunyange kana tichiziva vanhu vari kurarama zvakaipa, dzimwe nguva tinoona pachedu achipanga kubatana navo. Uye kuti kunoita kutevera Jesu ainzwa achifanira vanobviswa mutambo, havana kurega upenyu subbed mu. Asi nei isu kuchiva vamwe uye kufunga zvatiri kurasikirwa nechimwe chinhu?
NEI TICHIFANIRA ZVOKUFUNGA Tiri kurasikirwa?
Mumwe matambudziko edu kuti tinogona chete kuona zvakarurama pamberi pedu. Tinorasikirwa tanidzwa. Zvakafanana kamera kana zvinhu zviri mberi zviri kukoshesa uye zvose shure blurry. Tinofanira kugadziridza lenses edu saizvozvo mufananidzo yose richava pachena.
Hapana munhu panyika ino asingarambi vanotamburira kuona zvakajeka. Ndicho chimwe migumisiro vanotadza mwoyo yedu. Asi kana ukarasa youthfulness kupinda mukana wokuti vanhu vanga, rakawedzera kusvika njodzi. -Gore rimwe-vane vana vane makore vanotamburira kufamba zvakanaka, uye maviri- somethings vanotambura kuona zvakanaka.
Ndicho hazvishamisi. Zviri chikamu zvazvinoreva kuva vaduku munyika rawa. Upenyu hwedu zvave pfupi uye takave chete kuonekwa zvokuti. Zvakaoma kufungidzira dambanemazwi yose kana waita chete kuonekwa zvidimbu zvitatu. Izvi hazvirevi kuti tinofanira vachamurova isu mukunyadziswa; asi zvinoreva kuti tinofanira kuziva, nekuti kutadza kufunga nezveremangwana vanotadza kunogona kutungamirira kunjodzi.
Wakamboedza kutyaira ari snowstorm? The Christmas pashure mwana wangu wekutanga akaberekwa, inotyisa snowstorm yakarova sezvo mudzimai wangu uye ini akadzinga kudzokera DC kubva kuPittsburgh. The chando rwakakunda kuti maraiti pamusoro SUV yedu uye akawira saka kutsanya kuti windshield wipers vasingagoni kuramba kukwira nayo. zvipfundo zvomunwe angu dzikava chena sezvo ini nekakutya yakabata vhiri; Ndakaona upenyu mudzimai wangu nemwanakomana akanga ari mumaoko angu.
Ndaiva tya. Ndaigona chete kuona mainjisi mashoma pamberi pechiso changu, saka ini chaizvoizvo ndisingazivi kwandaigara kuenda. Handina kuziva zvakanga mberi, uye Ndaitofanira tariro zvose zvaizofamba. Izvozvo hazvina manzwiro akanaka. Ini ndisingagoni kuona kana paiva motokari akarega mberi kana munhu akadzima kure mahwindo ake chemabhazi-uye-enda motokari.
Handina kunyange nezvayo itsvedze Migwagwa asi. Kurova mabhureki enyu kwaireva motokari yako slid sezvinoita mbudzana akapfeka masokisi ari Tile uriri. Unogona kunzwisisa nei chaiva wangu muduku kufarira nemotokari nokusingaperi. Ndaiva ufuza chaihwo uye ari tsvedza nzvimbo.
Wakambofunga sei ngozi kutadza kufunga nezveremangwana kunogona kuva muupenyu hwedu? Kana isu chete kusarudza zvakarurama pamberi pedu, tava vakasungwa kumhanya kupinda munjodzi. Zvakawandisa vedu vari kuedza kurarama upenyu hwedu pasina kuremekedza zvinoitika pashure.
Kudhakwa kupati zvingaita senguva pfungwa yakanaka nguva, asi inozvidza Mwari uye kunounza zvisarudzo benzi. Sleeping nevakomana venyu kana musikana zvingaita senguva takunda iri nguva, asi kuti mhando madanana haana kusikirwa kuti kunakidzwa kunze yakasiyana Kubatanidzwa muchato.
Tichatevera svetuka matombo aya zvisarudzo zvakawanda sezvo isu nepa bhuku, asi pfungwa yacho, tinofanira kufunga tanidzwa. dzo yese yatinoita duku nhindi makuru Inovhiringidza. Uye pasina kutarisa tanidzwa kuti bhuku, tichasvika isa zvidimbu kururama nguva dzose. Zviri Zvinosiririsa aaifanira duku panguva kupfuura rose hwose.
*Uyu Excerpt kubva chitsauko idzva rinonzi Trip kechitatu, simuka. Usakanganwe, kana iwe kwerubwinyo rwakagara rwuripo murayiro Rise kubudikidza Ndira 26, uchafarirwa. boka zvipo pachena, kusanganisira bhonasi njanji kuti haana kuita pamusoro album. Heano mashoko ose kuti adzikinure zvipo zvenyu: http://risebook.tv/preorder
Emanuel • Ndira 15, 2015 pa 12:16 pm • pindura
Ndiri guru mumhanzi kukuchidzira chako asi ndakanga ndisingazivi unogona kunyora akanaka. Ngaarangarire akuropafadzei> Btw Ini ndinobva Suriname. Komborerai kumusoro
Matt • Ndira 15, 2015 pa 1:54 pm • pindura
Une zvinoshamisa nemashoko murume. Ramba wakadaro!
Zvakanga zvakadaro Chileshe • Ndira 16, 2015 pa 5:45 ndiri • pindura
Mutsetse wokupedzisira akamuka ini. Its Zvinosiririsa kukoshesa nguva nenguva kupfuura hupenyu hwese. Aimbova Dzava nguva dzose rakavapo negodo apo otheres vari muupenyu. Ngatitaurei tichivonga Mwari nokuda apo tiri. Pane chikonzero nei tiri ikoko. zvisinei, tinofanira kubvuma naye kubudikidza zvose.
Kiggundu Brian • Ndira 16, 2015 pa 2:19 pm • pindura
Wow!!.Havagoni kumirira kuwana bhuku iri asi sei isu gwadama navo muno #uganda Africa
Kiggundu Brian • Ndira 16, 2015 pa 2:24 pm • pindura
Wow…!!! rudo ichi sezvo mumhanzi yenyu nguva dzose anofuridzira ini uye handigoni kumirira gettin iyi asi sei pasi pano mu Uganda Africa!.Dai ishe vakuropafadzei
Shantiki • Ndira 16, 2015 pa 9:13 pm • pindura
Excerpt Izvi akandiita kufunga alot zvokusarudza kuti I nade muupenyu hwangu.
Carlton • Ndira 17, 2015 pa 1:19 pm • pindura
akanakidzwa Excerpt chairo rokusika uye kwazvo unokurudzira #stayblessed.
Gao • Ndira 18, 2015 pa 1:50 ndiri • pindura
Oh!Mwari kana ndinogona chete kuva bhuku rino…chidimbu ichi rinotyisa uye ikozvino ndiri kufungidzira mukuru mufananidzo(bhuku)..#moreblessingsToU
JieWoo • Ndira 19, 2015 pa 2:39 pm • pindura
WOW! akawana mhinduro!!! Mazvita Mayne! GBU! Kwaziso kubva Germany!
Terrell • Ndira 20, 2015 pa 2:07 ndiri • pindura
Trip Lee, Ndakarasikirwa nzira yangu pamwe yangu Rwendo kushumira Jehovha. Ndakakurira muKristu, asi vabva zvarinodzidzisa. Zvaisava kusvikira ndakateerera zvenyu Good Upenyu album uye vaviri mharidzo YouTube kuti pavakandirambidza kushamwaridzana nerimwe ini shure nenzira yaJehovha. Ndinoda kuti mazvita brotha vangu.
tamsyn • Zvita 28, 2015 pa 7:35 ndiri • pindura
Dearest Trip. A mutungamiri akanaka. nyaya yako zvaindiyeuchidza Ndakaona ukama hwangu naJesu uye sarudzo tuduku acharamba kukonzera zvinozoitika yangu sei kukosha kunaka. Tiri kuenda kupangidza Royal Jesu. Dai muverengi ose kuwana pfuma yamambo pfuma iyi bhokisi rinonzi SIMUKAI. Minyengetero yose nzira kubva Cape Town, Chamhembe Afrika.